जसको प्रतिष्ठा दाउमा छ - खेलकुद - साप्ताहिक
विश्व फुटबलको नियम नै हो, आफूलाई महान् खेलाडी सावित गर्नु छ भने विश्वकपमा त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाऊ । विश्वकप त हो, पेले र डिएगो म्याराडोना जस्ता खेलाडीलाई स्थापित गर्ने । उनीहरूले विश्वकपमा गज्जब खेले र सबैको मन जिते । उनीहरूले आफ्नो क्लबका लागि कस्तो खेले, अरु प्रतियोगितामा के कस्तो गरे, त्यो गौण हुने गरेको छ । अरू जे–सुकै र जतिसुकै प्रतियोगिता जिते पनि विश्वकपको उपाधि हात पार्न नसकेसम्म त्यसको केही अर्थ हुँदैन ।
पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समय विश्व फुटबल दुई खेलाडीमा रुमल्लिएको छ, अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो । उनीहरू विश्व फुटबलले पाएका सबैभन्दा राम्रा खेलाडी हुन् । मेसी र रोनाल्डो उत्कृष्ट खेलाडी हुन्, यसमा कुनै दुविधा पनि छैन । त्यसैले त उनीहरूले पालै पालो एकपछि अर्को वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार जित्दै आएका छन् । उनीहरूको उत्कृष्ट खेलाडीको होडमा एकछत्र राज छ ।
प्राय: विवाद पनि हुन्छ, मेसी राम्रा कि रोनाल्डो ? तर त्यससँगै जोडिएर आउने अर्को तथ्य के पनि हो भने उनीहरूले अहिलेसम्म विश्वकप जित्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू विश्वकपसँग जोडिएर आउने स्थापित नाम होइनन । यसपल्ट उनीहरूको प्रदर्शन कस्तो हुने हो ? सबैको नजर त्यतैतिर छ । यो प्रश्न यसपल्ट किन पनि गहन छ भने विश्वकप–२०१८ उनीहरूका लागि सम्भवत: अन्तिम विश्वकप हुनेछ । यसपटक रूसमा उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, किनभने उनीहरूले अर्को अवसर पाउने छैनन् ।
चार वर्षअघि अर्जेन्टिना फाइनलसम्म पुगेको थियो, तर जर्मनीको हातबाट पराजित भयो । त्यति बेला मेसीले विश्वकप ट्रफिलाई जसरी नजिकबाट नियालेका थिए, त्यसलाई लिएर कैद भएको तस्बिर अझै चर्चित छ । मेसीको समस्या के हो भने उनले आफ्नो क्लब बार्सिलोनाका लागि सबथोक जितिसकेका छन्, तर अर्जेन्टिनाका लागि भने केही पनि जित्न सकेका छैनन । अर्जेन्टिना पछिल्ला दुई कोपा अमेरिकाको फाइनलमा समेत पुगेको थियो ।
अर्जेन्टिना दुवै पटक चिलीको हातबाट पराजित भयो । मेसीले विश्वकप त के, कोपा अमेरिका पनि जित्न सकेका छैनन् । अर्जेन्टिनाका लागि यसरी लगातार उपाधि जित्न असफल रहेकै कारण उनले एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्याससमेत लिए । पछि फुर्सदमा पश्चाताप गर्दै फेरि त्यसलाई फिर्ता पनि लिए । मेसीमाथि संन्यास लिने चर्को दबाब पनि थियो । यसपल्ट पनि अर्जेन्टिना उपाधिको बलियो दावेदार हो र अन्तिम पटक मेसीको खेल जीवन दाउमा छ भने उनी समक्ष आफूलाई विश्वकपमा प्रमाणित गर्ने अवसर समेत ।
मेसीसँग जति बलियो टिम छ, त्यत्तिकै बलियो टिम रोनँल्डोसँग भने छैन । भलै दुई वर्षअघि पोर्चुगलले युरो जितेर देखाएको थियो, तर त्यसक्रममा न त रोनाल्डोको खेल उत्कृष्ट थियो, न त पोर्चुगलले प्रशंसा गर्न योग्य खेल खेलेको थियो । पोर्चुगललाई यसपटक कसैले पनि उपाधिको दाबेदार मानेका छैनन् । यस्तोमा आफूलाई प्रमाणित गर्न रोनाल्डो अझ बढी दबाबमा हुनेछन्, मेसीभन्दा पनि बढी । यस्तै स्थिति ब्राजिलका नेयमारको पनि हुनेछ ।
पछिल्लो विश्वकपमा ब्राजिल सेमिफाइनलमा रोकिएको थियो । त्यसअघि ब्राजिल र नेयमारको यात्रा भने सुमधुर रह्यो । नेयमारले राम्रो खेले, तर अन्तिम चारमा जर्मनीको सामना गर्नुअघि चोटग्रस्त भए । अहिले पनि उनी चोटग्रस्त छन्, तर उनले आफू धेरै हदसम्म चोटबाट मुक्त भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेयमारसँग बलियो न बलियो टिम छ । ब्राजिल त उपाधिको सबैभन्दा बढी प्रवल दावेदार हो, नम्बर १ नै ।
यस्तोमा नेयमार मात्र कसरी दबाबबाट मुक्त रहन सक्छन् र ? लगभग यस्तै स्थितिबाट इजिप्टका खेलाडी मोहमद सलाह पनि गुज्रिने छन् । त्यसो त उनको टिमले विश्वकप जित्छ भनेर कसैले दाबी गरेका छैनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने सलाहले खेल्ने हुन् अथवा होइन, त्यो पनि टुंगो छैन । सलाह अहिले चोटग्रस्त छन् । यसपटकको क्लब फुटबलमा सबैभन्दा चर्चित नाम सलाहकै रह्यो । उनले लिभरपुरका लागि गज्जब खेले र मेसी तथा रोनाल्डोलाई टक्कर दिए ।
यदी सलाह चोटबाट मुक्त भएर खेल्छन् भने उनीमाथि दबाब हुनेछ, लिभरपुलका लागि जस्तो खेलेका थिए, त्यस्तै खेल दोहोर्‍याउने । उनकै खेलमा भर पर्नेछ, इजिप्टले समूह चरण काट्नेछ कि छैन भन्ने कुरा । फ्रान्सका पउल पोग्बा पनि यसपटकको विश्वकपमा उत्तिकै दबाबमा रहने खेलाडी हुन् । लामो समयपछि फ्रान्स फेरि एकपल्ट उपाधिको दावेदार भएको छ । फ्रान्सले साँच्चै राम्रो गर्ने हो भने पोग्बाले पनि राम्रो खेल्नु पर्नेछ, तर यी २५ वर्षीय खेलाडीले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन् ।
उनी नेयमारपछि दोस्रो महँगा खेलाडी हुन् । म्यानचेस्टर युनाइटेड आएयता उनी फिक्का–फिक्का देखिएका छन् । फ्रान्सका लागि पनि उनले राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन । यस्तोमा आफ्नो नाममाथि जोडिएर आउने मूल्यप्रति उनले न्याय गर्नुपर्नेछ र राम्रो खेल्नु पर्नेछ । प्रतिष्ठाको दाउबाट पूराका पूरा दुई टिम पनि गुज्रिनेछन् र ती हुन्, इंग्ल्यान्ड र बेल्जियम । इंग्ल्यान्डसँग स्टार खेलाडीको कुनै कमी छैन, न त टिम नै खराव छ, तर विश्वकपमा इंग्ल्यान्डले पनि राम्रो गर्न सकेको छैन ।
त्यसमाथि इंग्लिस प्रिमियर लिग विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय र बढी हेरिने लिग हो । फेरि एकपटक पूरा इंग्लिस टिम दबाबमा हुनेछ । यस्तै स्थिति बेल्जियमको छ । अहिले बेल्जियम आफ्नो स्वर्णिम पुस्ताका खेलाडीबाट गुज्रिरहेको छ । युरोमा पनि बेल्जियमलाई सम्भावित विजेताका रूपमा हेरियो, तर त्यहाँ उसले केही गर्न सकेन । अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ । बेल्जियमका अधिकांश खेलाडी आफ्नो क्लबका लागि त राम्रो खेलिरहेका छन्, तर देशका लागि त्यस्तै प्रदर्शन गर्नबाट चुकिरहेका छैनन् । त्यसैले यो टिम पनि यसपटक उत्तिकै दबाबमा हुनेछ ।